Ngwa etemeete Suppliers and Factory - China makeup tools Ndị na-emepụta ihe
ngwa mma ndị ọzọ
Ntọala ahịhịa etemeete
Kachasị mma ịchọ mma 18 Agba ewute Matte ịgba ọtọ Pi...
Ọkachamara 88 agba eke Fusion Eyeshadow icha mmirimmiri...
10pcs Small Eyeshadow brush Set tụrụ okirikiri isi M ...
Processional High Quality 11pcs etemeete ahịhịa na-atọ ụtọ bea...
Ngwa ihe eji eme akwa pedicure Tọọ ntu ntu Callus Wepu...
Ngwa ịchọ mma etemeete N'onwe Gị ihu nkpuchi ngwa ahịhịa dị nro silicone ihu nkpuchi ahịhịa
Nkọwa ngwa ngwa Ebe Mmalite: Zhejiang China Aha ika: OEM Nọmba Nlereanya: BRS0101MK Ụdị: Ihe eji eme etemeete Akara akara: Ngwunye aha nkeonwe anabatara: 1pcs / opp Agba: Dị ka foto ma ọ bụ ngwa omenala: Ngwa nlekọta ịchọ mma mma Njirimara: Arụ ọrụ enyi na akpụkpọ ahụ. : Ngwa ahịhịa na-ewu ewu ngwaahịa 2018 n'ụlọ Mbupu: ASAP isiokwu: silicone makeup brush Product Name: DIY Tool Clay Applicator Silicone Professional Mask Brush with Logo...
etemeete ahịhịa ahịhịa Tọọ Premium sịntetik Foundation ahịhịa etemeete ahịhịa Tọọ ngwakọta ihu ntụ ntụ blush concealers Anya Onyunyo Mee elu ahịhịa Kit 8 PCS
A na-eji eriri sịntetịt dị elu mee bristles nwere nnukwu njupụta, dị nro na enweghị isi nke dị mma maka iji akpụkpọ anụ mee ihe.Na-adịgide adịgide, anaghị awụfu na anaghị ada ada, dị nnọọ mfe ịgwakọta ihe ịchọ mma n'ahụ gị n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Ahịhịa concealer, ahịhịa ime ihiere, ahịhịa nfụkasị anya, ahịhịa nku anya, ahịhịa egbugbere ọnụ, ahịhịa ntọala, ahịhịa contour ahịhịa, wdg fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ịchọrọ maka ihu gị na ngwa etemeete anya.
All brushes bụ nnọọ nro na mfe ijide etemeete, zuru okè maka etemeete nwaanyị na ndị mmadụ n'otu n'otu na nkịtị na-enwe mmetụta akpụkpọ na-agaghị akpasu gị iwe.
Nke a 8 PC etemeete brush set anya nnọọ chic na fashionable na kasị ewu ewu mara mma na agba, A ga-nwere na gị etemeete collection.
Zuru okè maka ma onye mbido na onye na-ese ihe etemeete dị ka ndị a dị mfe iji ma dị elu karịa ọnụ ahịa dị ọnụ ala, ụdịdị zuru oke na-enye gị ohere idobe etemeete gị.Onyinye kacha mma maka nne, enyi nwanyị, ụmụ nwanyị na onye hụrụ n'anya!
10pcs Mermaid etemeete ahịhịa Set Eye Make Up brushes
A na-eji bristles nylon mee brushes ahụ, dị nro mana ọ naghị adị nro, agaghị adọka ma ọ bụ kpasuo akpụkpọ ahụ gị iwe.Kwesịrị ekwesị ụdị akpụkpọ anụ ọ bụla, ọbụna akpụkpọ anụ.Ntọala ahịhịa a agaghị awụfu, ọ ga-egosi mma okike gị wee hapụ njedebe na-enweghị ntụpọ
Aka mermaid pụrụ iche, mara mma na nkecha.Ngosipụta ahụ anaghị ada ada ma dịkwa mfe ijide.Zuru oke maka ịrụ ọrụ.
Ọ dị mfe iji ma dị ọcha.Ị nwere ike ịsacha ma hichaa ha naanị na mmiri oyi.Ọ dị mfe iji brushes kwesịrị ekwesị maka ndị mbido.
etemeete ahịhịa Tọọ 6pcs 3D Mermaid etemeete ahịhịa ịchọ mma ahịhịa Eyeshadow Eyeliner Blush brushes.
ULTRA SOFT BRISTLES: Nke a na-eme ahịhịa etemeete nke naịlọn bristles dị nro dị elu, na-adịghị akwafu na isi na-enweghị isi, ọ dị mfe ịrapara ntụ ntụ iji mepụta ọdịdị zuru oke.
AKWỤKWỌ: Azụ azụ 3D na-egbuke egbuke mermaid ọdụ udi ka ejiri ihe plastik adịchaghị mma, na-adịgide adịgide yana ọmarịcha anya.
Mkpokọta: Nke a 6 ibe ahịhịa set na-agụnye anya onyinyo ahịhịa, nku anya ahịhịa, eyeliner ahịhịa, egbugbere ọnụ ahịhịa, wdg, zuru okè maka itinye, shading na ngwakọta ngwaahịa.
Zuru okè maka ụdị etemeete niile: Nke a mermaid eye brush set dị mma itinye mmiri mmiri, ntụ ntụ ma ọ bụ ude ịchọ mma.Bristles dị nro dị nro ga-enye gị aka silky wee hapụ njedebe na-enweghị ntụpọ.
Nchekwa maka akpụkpọ anụ ahụ: Ndị a na-eme ka ihe na-eme ka ọ dị mfe ihicha ma na-ehicha ngwa ngwa, dị mma maka ojiji kwa ụbọchị, iji brushes etemeete ga-eme ka ọ dị mfe ịmepụta ngwa ngwa ọkachamara ọkachamara.
Aha njirimara osisi ejiri aka 24pcs ọkachamara etemeete brushes edobere maka brushes mara mma
Nwere brush bristle sịntetik iri abụọ na anọ nwere aka bamboo
Ahịhịa gụnyere: ihe nchekwa dị larịị, ntụ ntụ mara mma, ntụ ntụ mara mma, ọhịhịa angled, ọmarịcha ewepụghị multipurpose, ntọala mara mma.
Onyunyo buru oke ibu, nkenke ama ama, ihe njiri mara doefoot, onye ama ama, ndò mara mma, onyinyo dome ama ama.
Onye na-agwakọta agwa agwa, onye na-ahụ n'anya, onye ama ama concealer, onyinyo angled, ọmarịcha liner, brow mara mma.
Nkọwapụta ama ama nke atụpụtara, obere onyinyo mara mma, ọmarịcha liner, liner mara mma, nkọwa zuru oke nke pere mpe, akara nkuku ama ama.
Processional High Quality 11pcs etemeete ahịhịa Tọọ ihe ịchọ mma etemeete smudge Pink Makrup ahịhịa N'ogbe
◆ URU ANYỊ.MURAN ọkachamara etemeete brushes set na-enye àgwà dị ka ama ama na ọnụ ahịa ọnụ.
◆GLAMOROUS BRUSH SET WITH GORGEOUS PACKAGE.ENYERE EKERESI MMADỤ NDỊ na-ahụ etemeete n'anya.
◆ PREMIUM SYNTETIC HAIR, Obi ọjọọ FREE.MURAN etemeete brush na-echebe anụmanụ ọ bụla ka ọ ghara imerụ ahụ ahụ.
◆Anyi bụ ọkachamara mmepụta nke etemeete brushes maka iri afọ.we maara etemeete na ahịhịa tent nke ọma,nwere ike izute gị mkpa site beginner ka studio ịchọ mma artists.
◆ 100% EGO NKE NKWUKWU Ọ BỤRỤ N'ỤRỤGHỊ EGO NA MAKEUP BRUSH. afọ ojuju gị bụ ihe mgbaru ọsọ anyị.MURAN ga-anọnyere gị oge niile.
10pcs Small Eyeshadow brush Set tụrụ aro gburugburu isi etemeete ngwa ahịhịa
1. Brand New na High mma.
2. SOFT na SILKY na-emetụ aka, brushes dị oke ma na-eme nke ọma.
3. 10pcs Kabuki Brush Set Synthetic Makeup Brush Foundation Eyeshadow Blush Concealer Powder brushes zuru oke maka ma ndị mbido na ndị ọkachamara etemeete ọkachamara.
Ụdị brushes ise dị iche iche (Angled, Round, Flat, Flat Angled, Tapered) na-enye ngwọta dị mfe na ọkachamara maka ntọala ihe ịchọ mma bụ isi.
Dịka ọmụmaatụ, ahịhịa etemeete angled zuru oke maka ihicha na bronzer.Obere ahịhịa dị larịị bụ maka concealer na ntụpọ.
Ọkachamara n'ogbe 10 pcs Rose Gold Plastic Plating Handle Blush Make Up brushes Girlsmụ agbọghọ kwa ụbọchị etemeete ahịhịa na-etinye akwa
Ọnụọgụ brushes etemeete: 10pcs/set
Aka ihe: High mma plastic handle na rose gold electro plating elu
Ihe eji eme tube: tube aluminum siri ike
Akụrụngwa ntutu: Super dị nro na ntutu nylon dị nro
ngwugwu ọkọlọtọ: akpa UP,
ngwugwu OEM: Dị, nabata akara nkeonwe na ngwugwu omenala.
N'ogbe Custom 5Pcs Premium Travel Portable Obere etemeete ahịhịa set eyeliner Eyeliner egbugbere ọnụ mee ka ahịhịa set
100% Brand ọhụrụ na elu mma
Ihe na-agba agba: ntutu sịntetik, ntutu isi
Ihe na-acha ahịhịa ferrule: alloy aluminum
Ihe eji eme ahịhịa: Plastic
Ihe na-ahịhịa cylinder: Aluminom
Ngụkọta ogologo: 12.5cm
Ogologo ntutu: 1.4cm
Ogologo tube: 15cm
Ọnụ ọgụgụ: 5pcs/set
Agba: Pink, Black, Cyan, Purple, Gold
Ọkachamara 24pcs etemeete ahịhịa na-edozi ngwa ngwa ịchọ mma etemeete ahịhịa nwere akpa akpụkpọ anụ.
100% Ka Ọhụrụ
Agba: Pink, nwa, osisi agba, odo odo, uhie, kọfị
Ogologo ahịhịa: Ihe dịka 7.9"
Akụkụ akpa: 24 * 15.5 * 5cm (apịaji)
Ihe eji eme ihe: Osisi
Ihe eji eme ahịhịa: Fiber batt
Makeup Foundation ahịhịa ahịhịa BB ude ahịhịa rụrụ ntụ ntụ ahịhịa Flat Kit ịchọ mma make up brushes
Ahịhịa siri ike na ntakịrị okirikiri
eriri dị nro na-eme ka etemeete gị mara mma ma maa mma
Eji maka etemeete Blush/Loose Powder/Foundation
Na-adịgide adịgide ma dị mfe iji
Ọgaranya bristles etemeete ka mma.
Nhazi mkpịsị aka petal, dị mfe nghọta.
Aka ahịhịa diamond akụkụ atọ, dị mfe iburu na iji.
Ihe dị ka brushes 200,000 nwere ihe siri ike.
Ụzọ ahịhịa agaghị apụ apụ.
1pcs nnukwu ntụ ntụ ahịhịa ọla edo blush ịchọ mma etemeete makeup brushes Foundation ịchọ mma mma Tools.
A na-eji ahịhịa a nke a na-eji ihe dị elu mee ihe dị elu, dị oke nro, akpụkpọ anụ na nke na-adịgide adịgide, nwere ike iji mee ka uzuzu ntu dị ọcha, na-arụkwa ọrụ dị ka ahịhịa ntọala, ahịhịa blush na ihe ndị ọzọ.
1. Ejiri ihe dị elu mee ihe, dị oke nro, akpụkpọ anụ na-adịgide adịgide.
2. Enwere ike iji hichaa uzuzu ntu, na-emekwa ihe dị ka ahịhịa ntọala, ahịhịa blush na ihe ndị ọzọ.
3. Iji aka ogologo mara mma, nye mmetụta aka dị ntụsara ahụ.
4. 5 ụdị ịhọrọ, izute gị dị iche iche chọrọ.
5. Ọ dị mma maka ma ndị ọkachamara na-ese ntu na ndị na-amalite.